တပ်မတော် ဆိုင်ရာ အကြံပြု၊ဆွေးနွေးခန်း: November 2011
အနာဂါတ် တပ်မတော်ဆိုင်ရာ မိမိတို့အမြင်လေးများ..၃
ကို Zeus ရေ ကျွန်တော့်ကို အရေးတယူ ဖြည့်စွက်ဆွေးနွေးပေးလို့ ကျေးဇူးအထူးပါ။ နောက်လည်း ဆွေးနွေးပေးပါဦး။ ကျန်တဲ့ ညီအစ်ကိုတွေရောပေါ့။
ခြေလျင်နဲ့ ပတ်သက်လို့ကတော့ ကျွန်တော်ရေးတာ သိပ်မရှင်းဘူး ဖြစ်သွားတယ်။ ခြေလျင်ဆိုတာ Infantry အားလုံးကို ခြုံရေးလိုက်တာပါ။ ခြေမြန် Light Infantry ရော၊ ယာဉ်တင်ခြေလျင် Motorized Infantry ရော ၊ သံချပ်ကာယန္တရားတပ် Mechanized Infantry ရော ကိုဆိုလိုတာပါ။ သူများနိုင်ငံ့တွေကလို Mechanized Infantry ကိုဆိုတာမဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့တပ်တွေကတော့ အဓိကအားဖြင့် ခြေမြန်တွေပေါ့။ မြေမျက်နှာသွင်ပြင်အရကော၊ ကုန်ကျစရိတ်ကြောင့်ကောပေါ့။ ယာဉ်တင်ပြောင်းမယ်ဆိုရင် တပ်ရင်းတစ်ရင်းကို truck အစီး ၄၀ လောက် အပြင် High Mobility Vehicle အစီး ၂၀ လောက်ပါလိုမယ်။ လက်နက်ကြီး တပ်ခွဲအတွက်ပေါ့။ ဒါဆိုရင်တော့ Konkrus တွေ Kornet တွေတပ်လို့ရမယ်။
သံချပ်ကာယန္တရားတပ်ကတော့ အစ်ကိုပြောသလိုပဲ ကျွန်တော်တို့ မြေပြင်အတွက် အဆင်မပြေပါဘူး။ ဒါကြောင့် သံချပ်ကာတပ်အောက်မှာ ထည့်ထားတာပဲ ကောင်းပါတယ်။သံချပ်ကာတပ်တွေမှာ AVLB, ARV, AEV စတဲ့ စစ်မြေပြင် အင်ဂျင်နီယာယာဉ်တွေ အများကြီးထည့်ထားတာလည်း ဒါကြောင့်ပါပဲ။ US တပ်တွေထက်များပါတယ်။
လေကြောင်းချီတပ်တွေကတော့ ကျွန်တော် လောဘကြီးသွားတယ်ဗျ။ အစ်ကိုပြောတာ မှန်ပါတယ်။ တပ်မတစ်ခုက များလွန်းပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ မတတ်နိုင်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် British 16 Air Assault ပုံစံမျိုး ပြန်ရေးကြည့်ထားပါတယ်။ တပ်မပုံစံကော တပ်မဟာပုံစံကော ရေးထားပါတယ်။ ယှဉ်ဖတ်ကြည့်ပါဦး။
ချိန်းတပ်ယာဉ်။ ။ သံချပ်ကာတပ်ရင်းများတွင် တပ်ဆင်ထားမည် ဖြစ်ပြီးတပ်မဟာတစ်ခုလျှင် ၁၀၅စီးဖြင့် တပ်မတော်တစ်ခုလုံးအတွက် ၈၅၀ ခန့်။ လက်ရှိ BMP-1 , Type-85,Type-90 နှင့် MT-LB များ၏ အရေအတွက်မှာမလုံလောက်ပါ။ ထပ်မံတည်ဆောက်/ ၀ယ်ယူရပါမည်။ ထို့အပြင် Type-85 နှင့် Type-90 ထို့၏ 12.7 မမစက်သေနတ် အစား BTR-3 ပုံစံ 30 မမစက်အမြှောက်များဖြင့် တပ်ဆင်ရမည်။ ချိန်းတပ်ယာဉ် အင်အားမလုံလောက်သေးချိန်တွင် တင့်ကားတပ်ရင်းများ ( light tank များသို့မဟုတ် obsolete MBTများဖြင့် တပ်ဆင်ထားမည် ) သို့မဟုတ် ဘီးတပ်သံချပ်ကာယာဉ်တပ်ရင်းများဖြင့် ခတ္တအစားထိုး ထားလို့ရမယ် ထင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် MEV, ARV, AEV , AVLB နှင့် MCV variants များထုတ်လုပ်နိုင် ဖို့လည်း ကြိုးစားရမှာပါ။ ကုန်ကျစရိတ်တော့ နည်းနည်းများမယ် ထင်ပါတယ်။
ဘီးတပ်ယာဉ်။ ။ယန္တယားတပ်ရင်းများတွင် တပ်ဆင်ထားမည် ဖြစ်ပြီးတပ်မဟာတစ်ခုလျှင် ၁၀၁စီးဖြင့် တပ်မတော်တစ်ခုလုံးအတွက် ၈၀၀ ခန့်။ ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင် BTR-3အစီး 1000 တည်ဆောက်ရန် စီမံကိန်းရှိရာလိုအပ်သောအရေအတွက် ရရန် အခက်အခဲမရှိနိုင်ပါ။ MEV, ARV, AEV, AVLB, CV နှင့် MCV variants များထုပ်လုပ်နိုင်ရန်သာ ကြိုးစားရမှာပါ။
MEV – Medical Evacuation Vehicle
ARV – Armored Recovery Vehicle (wrench only)
AEV – Armored Engineering Vehicle (dozer and excavator arm)
AVLB – Armored Vehicle Launched Bridge
CV- Command Vehicle
MCV – 120mm Mortar Carrier Vehicle
လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးယာဉ် (Self propelledanti aircraft weapon)
တပ်မဟာတစ်ခုလျှင် ၁၂ စီးဖြင့် တပ်မတော်တစ်ခုလုံးအတွက် ၁၀၀ခန့်။ ကျွန်တော်တို့မှာ 9K22Tunguska တွေ ရှိပြီးသားဆိုတော့ ဒါလည်းသိပ်ပြသနာမရှိလောက်ပါဘူး။
လေထီး/ရဟတ်ယာဉ်ချီတပ်မဟာများ ( ၂ ခုစီ)
ဒီတပ်မဟာတွေကိုတော့ ခြေလျင်နှင့် သံချပ်ကာတပ်ကထူးချွန် စစ်သည်များဖြင့်သာဖွဲ့စည်းထားမယ်လေ။ အထူးတပ်ဖွဲ့ တစ်ပိုင်းပေါ့ဗျာ။ လေ့ကျင့်ထားပုံတော့ မတူဘူးပေါ့ ဒါပေမယ့် ဒီတပ်မဟာ နှစ်မျိုးရဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံကိုအတူတူပဲထားမယ်ဗျာ။
-လေထီး/ရဟတ်ယာဉ်ချီတပ်ရင်း ( x၂)
- ခြေလျင်တပ်ခွဲ ( x ၃) ၊ တစ်ခွဲကိုခြေလျင်တပ်စု ၃ စု ( တစ်စုကိုစက်လတ် ၂ လက်) + လက်နက်ကြီးတပ်စု ( ၈၄ မမနောက်ပွင့် ၆ လက် နှင့် ၆၀မမ စိန်ပြောင်း ၂ လက်)
- လက်နက်ကြီးတပ်ခွဲ ၊ တင့်ဖျက်ဒုံး ( ကောင်းတာကတော့ 9K115-2 Meits-M တွေပေါ့ဗျာ၊ 9K113 Konkrus or 9K133 Kornetတွေကတော့ လေးလွန်းတယ် ) ၂၀ လက် (လူ ၈၀ လောက်ပဲလိုမှာပါ) + ၈၁ မမစိန်ပြောင်း ၄ လက်
- အမြှောက်တပ်ခွဲ ( x ၃) ၊တစ်ခွဲကို 76mm M48 ဒါမှမဟုတ် 105mm L118 ၈လက်ပေါ့ ၊ 122mm ဒါမှမဟုတ် ဒီထက်ကြီးတဲ့ အမြှောက်တွေကတော့ လေကြောင်းချီတပ်တွေအတွက် မကောင်းပါဘူး။
- လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးတပ်ခွဲ ၊ Igla MANPADS ၁၂ လက်
- လျှပ်စစ်နှင့် စက်မှုလက်မှု အင်ဂျင်နီယာ တပ်ခွဲ
- ထောက်/ပို့တပ်ခွဲ ( x ၂ )
ဒီတပ်တွေကတော့ ရန်သူနောက်ပိုင်းမှာ behind enemy lines တိုက်ရနိုင်တာကြောင့် ၊ ကိုယ့်တပ်တွေနဲ့ ဝေးဝေးမှာ တိုက်ပွဲဝင်နိုင်အောင် ဖွဲ့စည်းပုံမှာသံချပ်ကာတိုက်ဖျက်ရေးကိုအလေးပေးထားတာပါ။ ပုံမှန် ခြေလျင်ရဲ့ တပ်ခွဲမှာ RPG-7 ၊တပ်ရင်းမှာ Carl Gustav နဲ့ကတော့ အလုပ်မဖြစ်လောက်ဘူးထင်တယ်လေ။ စစ်သည်လိုအပ်ချက် တိုးမလာအောင်လို့ စိန်ပြောင်းတွေကိုလျှော့ထားပါတယ်။
နောက်လေ့ကျင့်ရေးအခက်အခဲတွေ၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလေယာဉ်၊ ရဟတ်ယာဉ် အခက်အခဲတွေ ရှိလာနိုင်တာကြောင့် တပ်ခွဲ ၃ ခွဲ x ၂ ရင်းပဲထည့်ထားတာပါ။ နောက်ဖြစ်နိုင်တဲ့ အချိန်ကြမှ အင်အား နှစ်ဆတိုးပြီးတပ်ခွဲ ၄ ခွဲ x ၃ ရင်းတိုးဖွဲ့ကြတာပေါ့။
ခြေလျင်၊ သံချပ်ကာလိုတပ်မလိုက်ထက် တပ်မဟာတစ်ခုခြင်း တိုက်ပွဲဝင်ဖို့ များတာကြောင့် တပ်မဟာအဆင့်မှာတင် အမြှောက်နဲ့ ထောက်ပို့တပ်ရင်းတွေ ထည့်ထားတာပါ။
ဒီတပ်တွေအတွက် အခက်အခဲကတော့ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးပဲဗျို့။ လေထီးတပ်ရင်း ၁ ရင်းကို IL-76 or equivalent သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလေယာဉ် ၆ စင်းလောက်လိုမယ်။ လေယာဉ်သေးရင် eg; Y-8 စင်းရေပိုလိုမှာပေါ့။ ရဟတ်ယာဉ်ချီတပ်ရင်းတွေကလည်းတစ်ရင်းကို Mi-17 ခေါက်ရေ ၂၄ ခေါက်လောက်လိုမယ်။ ၈ စင်းနဲ့ သယ်ရင် ၃ ကြော့ပေါ့။ ဒီထက် ခွဲသယ်လို့လည်းအဆင်မပြေလောက်ဘူး။ (ပိုကောင်းတာက Medium Air Assault Transport Helicopter တွေဖြစ်တဲ့ Ka-60 တို့ UH-60 တို့ပါ။ ဒါပေမယ့် အစင်းရေပိုလိုလာမှာ ဖြစ်လို့ ကျွန်တော်တို့ စီးပွားရေးနဲ့ကမဖြစ်နိုင်ဘူး။)
ပစ်ကူပေးဖို့ Mi-24 တွေကတော့ (ဒီတပ်မတစ်ခုတည်းမှာတင် စုပြုံသုံးရင်) လိုတာထက်တောင် များသေးတယ်။ ( US တပ်မတွေတောင်မှ Army ဆိုရင် 24 AH-64 Apache ၊ Marine Corps ဆိုရင် 36 AH-1 Cobra ပဲရှိတယ် ) ကျွန်တော်တို့ကအစင်း 60 တောင်မှ။
အမြှောက်။ ။တပ်မဟာတစ်ခုလျှင် ၂၄ လက်ဖြင့် တပ်မတော်တစ်ခုလုံးအတွက် ၁၂၀ ခန့်။ ကျွန်တော်တို့မှာလုံလုံလောက်လောက် ရှိပါတယ်။လေထီးတွေမှာ ၇၆မမ၊ ရဟတ်ယာဉ်ချီတွေမှာ ၁၀၅ မမဆိုရင် အဆင်ပြေပါတယ်။ GPS fire control, laser range finders, rocket assisted round, smart ammunition တွေနဲ့ အဆင့်မြှင့်နိုင်ရင်တော့ ကောင်းပါတယ်။
November 23, 2011 8:17 PM
လေကြောင်းချီတပ်မဟာ ( Review )
ဒါကတော့ ကို Zeus ကွန်မန့်ကို မူတည်ပြီး ပြန်စည်းစားထားတာပါ။ British 16 Air Assault Brigade ကို အခြေခံထားတာပါ။
- လေထီးတပ်ရင်း ( x ၂ )
---- လေထီးတပ်ခွဲ ( x ၄ )
- ရဟတ်ယာဉ်ချီတပ်ရင်း ( x ၂ )
---- ရဟတ်ယာဉ်ချီတပ်ခွဲ ( x ၄ )
---- အမြှောက်တပ်ခွဲ ( x ၃) ၊တစ်ခွဲကို 105mm L118 ၈လက်ပေါ့
---- လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးတပ်ခွဲ ၊ Igla MANPADS ၁၂ လက်
---- အင်ဂျင်နီယာတပ်ခွဲ ( x ၃ )
---- လျှပ်စစ်နှင့် စက်မှုလက်မှု အင်ဂျင်နီယာ တပ်ခွဲ
---- ထောက်/ပို့တပ်ခွဲ ( x ၄ )
EME နဲ့ ဆေးတပ်တွေကတော့ British တွေလို တပ်ရင်းအဆင့်တွေ မလိုဘူးထင်ပါတယ်။
---- ရဟတ်ယာဉ်တပ်ခွဲ ( x ၃ ) ၊ တစ်ခွဲကို WZ-3 ဒါမှမဟုတ် Mi-2 အပေါ့စား ရဟတ်ယာဉ် ၈ စင်းပေါ့
---- ရဟတ်ယာဉ်တပ်ခွဲ ( x ၃ ) ၊ တစ်ခွဲကို Mi-17 ရဟတ်ယာဉ် ၈ စင်းပေါ့
---- ရဟတ်ယာဉ်တပ်ခွဲ ( x ၃ ) ၊ တစ်ခွဲကို Mi-24 ရဟတ်ယာဉ် ၈ စင်းပေါ့
ကျွန်တော်တို့မှာ လုံလောက်တဲ့ ရဟတ်ယာဉ်တွေရှိမှာပါ။ ပိုထွက်လာတဲ့ Mi-24 တွေကိုတော့ တပ်မကြီးအားလုံးမှာ ဖြန့်ဝေထားမယ့် အစား အဓိကထိုးစစ်တပ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ သံချပ်ကာတပ်ဖွဲ့မှာတင် စုစည်းထားတာ ပိုကောင်းမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ တပ်ရင်း ၁၀ ရင်းရှိလာမှာ ဖြစ်လို့ရယ် နောက် အထူးတပ်ဖွဲ့ ဖြစ်လို့ရယ် တပ်မဟာမှုးကို ဗိုလ်ချုပ် Major General ထားတာ အဆင်ပြေ မယ်ထင်ပါတယ်။ တပ်မဌာနချုပ် တစ်ခုလည်း သက်သာတာပေါ့။
အမြှောက်တပ်မဟာ ( x ၁၀)
- အမြှောက်ကြီးတပ်ရင်း ( x ၃)
---- အမြှောက်တပ်ခွဲ ( x ၃) ၊ ယာဉ်ဆွဲ towed ၁၅၅မမ ၊ ၁၃၀မမ၊ ၁၂၂မမ တွေဆိုရင် တပ်ခွဲ တစ်ခွဲကို ၆ လက်၊ ယာဉ်တင် self-propelled ၁၅၅မမ တွေဆိုရင် ဒါမှမဟုတ် ယာဉ်ဆွဲ ၁၀၅မမ တွေဆိုရင် တစ်ခွဲကို ၈ လက် (ယာဉ်တင်တွေက သံချပ်ကာတပ်မတွေကို ဦးစားပေး တပ်ဆင်ပေး ပါမယ်။ ခြေလျင်တပ်မတွေ အတွက်လဲ ၁၅၅မမ တွေကို အနည်းဆုံး တပ်မဟာတစ်ခုကို တစ်ရင်းရှိစေခြင်ပါတယ်။ ကျန်တဲ့နှစ်ရင်း ကတော့ ၁၃၀မမ၊ ၁၂၂မမ တွေပေါ့။ ၁၀၅မမ တွေကတော့ လေကြောင်းချီတပ်မဟာ အတွက်ပဲ ကောင်းပါတယ်။ QF 25 pounder, QF 75mm and BL 5.5 inch တွေကတော့ အနားသာ ပေးလိုက်ပါတော့။)
- ဒုံးတပ်ရင်း ( x ၂ )
---- ဒုံးတပ်ခွဲ ( x ၃ ) ၊ တစ်ခွဲလျှင် ဒုံးပစ်လောင်ချာ ( Multiple Rocket Launchers – MRL ) ၁၂၂မမ ဒါမှမဟုတ် ၂၄၀မမ ၆ လက်
- ပစ်မှတ်ရှာတပ်ခွဲ ( လောလောဆယ်မှာတော့ ရှေ့တန်းအကဲကြည့်တွေပေါ့။ နောင်ကြရင်တော့ အမြှောက်ပစ်မှတ်ရှာရေဒါ Counter Battery Radar တွေ တပ်ဆင်ရမှာပေါ့ )
၁၅၅မမ ယာဉ်တင် အမြှောက်ကြီးများ ။ ။ တပ်မဟာတစ်ခုလျှင် ၇၂ လက်ဖြင့် သံချပ်ကာတပ်မ နှစ်ခု၏ အမြှောက်တပ်များတွင် တပ်ဆင်မည်ဖြစ်ရာ တပ်မတော်တစ်ခုလုံး အတွက် ၁၈၀ လက်ခန့်။ လက်ရှိ Nora B-52 တွေကိုလည်း ဖြစ်နိုင်ရင် ၁၅၅မမ ပြောင်းတွေလဲနိုင်ရင် ထောက်ပို့ကိစ္စ ပိုလွယ်မလားလို့။ သိပ်တော့ အရေးမကြီးပါဘူး။ ၁၅၂မမ လည်း ထိရောက်မှုမှာ သိပ်မကွာပါ။ Nora B-52 နဲ့ SH-1 တွေပေါင်းလိုက်ရင် လိုရင်တောင် နည်းနည်းပဲ နေမှာပါ။
၅၅မမ ယာဉ်ဆွဲအမြှောက်ကြီးများ ။ ။ တပ်မဟာတစ်ခုလျှင် တစ်ရင်း ၊ တစ်ရင်းတွင် ၁၈ လက်ဖြင့် တပ်မဟာ ၈ ခုတွင် တပ်ဆင်ဖို့ ဆိုရင် အလက် ၁၈၀-၂၀၀ လောက်လိုမယ်ဗျ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ လက်ရှိ KH-179 တွေ Soltam တွေကို နည်းနည်းထပ်ဝယ်၊ ရှိရင်းဆွဲတွေကို အဆင့်မြှင့်လိုက်ရင် အဆင်ပြေမယ်ထင်ပါတယ်။
၁၃၀မမ / ၁၂၂မမ ယာဉ်ဆွဲ အမြှောက်များ။ ။ တပ်မဟာရှစ်ခု ၊ တစ်ခုကို နှစ်ရင်း ၊ တစ်ရင်းကို ၁၈ လက်နဲ့ ဆိုတော့ ၃၆၀ လောက်လိုမှာပေါ့။ ကျွန်တော်တို့မှာ လုံလောက်တဲ့ အရေအတွက် ရှိပြီးသားဖြစ်မှာပါ။ (wiki ကတော့ ၁၂၂မမ D-30 ၂၇၀လက်နဲ့ ၁၃၀မမ Type-59-1 ၁၆၀ လက်လို့ပြထားတယ်။ ဟုတ်မဟုတ်တော့ ? )
၁၀၅မမ ယာဉ်ဆွဲ အမြှောက်များ ။ ။ လေကြောင်းချီတပ်မရဲ့ အမြှောက်တပ်မဟာမှာတင် တပ်ဆင်ဖို့ဆိုရင် တစ်ရင်းထဲဆိုတော့ ၃၂ လက်ပဲလိုမှာပါ။ ( ပိုတာတွေကို ရောင်းပစ်ဗျာ )
ဒုံးပစ်လောင်ချာများ ။ ။ တစ်ရင်းကို ၁၈ လက်၊ တပ်မဟာတစ်ခုကို နှစ်ရင်း ၊ တပ်မဟာ ၁၀ ခုလုံးမှာ ဆိုရင် ၄၈၀ လောက်လိုမှာပေါ့။ လက်ရှိ 530 လောက် ( ယာဉ်တင် BM-21,BM-27 Type-90, Type-90B, Type 1990 များသာ ၊ ယာဉ်ဆွဲတွေကတော့ အနားသာပေးလိုက်ပါတော့ ) ဆိုတော့ လောက်မှာပါ။ အဲဒီလောက် မရှိဘူးဆိုရင်တော့ တပ်မဟာတစ်ခုကို တစ်ရင်းပေါ့ ဒါဆိုရင်တော့ အလက် ၂၄၀ လောက်ပဲ လိုမှာပေါ့။
ပစ်မှတ်ရှာနှင့် အကဲကြည့် ။ ။ အဲဒီမှာ အဓိက ပြဿနာဗျို့ ။ လေ့ကျင့်ပြီးသား လူလည်းမရှိ၊ သင့်တော်တဲ့ ပစ္စည်းလည်း မရှိနဲ့။ ခြေလျင်၊ သံချပ်ကာနဲ့ တွဲမယ့် အကဲကြည့်လောက်နဲ့ မလုံလောက်သေးဘူးလေ။ ပင်မတပ်တွေရဲ့ ရှေ့တန်းကနေပြီးတော့ ၊ ရန်သူနယ်မြေထဲ ၀င်ပြီးတော့ ပစ်မှတ်လမ်းညွှန်ဖို့ ဆိုရင်တော့ အထူးတပ်ဖွဲ့အဆင့် လေ့ကျင့်ထားမှ ဖြစ်မယ်လေ။ အဆင့်မြင့်တဲ့ ဆက်သွက်ရေး၊ ထောက်လှမ်းရေး ကိရိယာတွေလဲ လိုမယ်။ ဒါကိုတော့ အရေးတကြီး ဖြည့်ဆည်းသင့်တယ် ထင်ပါတယ်။ Counter Battery Radar တွေ Unmanned Aerial Vehicle တွေကတော့ နောက်ပိုင်း ကိစ္စတွေပေါ့။
ရေးသားသူ MM at 9:20 PM 1 comment:
အနာဂါတ် တပ်မတော်ဆိုင်ရာ မိမိတို့အမြင်လေးများ..၂
ဆွေးနွေးမှု အပိုင်း (၂)..
အရင်တစ်ခေါက်က တပ်မကြီးနဲ့ တပ်မတွေ အကြာင်းရေးခဲ့ပါတယ်။ အခုတစ်ခေါက် တပ်မဟာတွေ အကြောင်းဆွေးနွေးခြင်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်စိတ်ကူးထဲက တပ်မတော်ပေါ့်။ အားလုံးလဲ ကျေးဇူးပြုပြီး ၀ိုင်းဝန်းဆွေးနွေးပေးကြပါ ခင်ဗျား။
တပ်မဟာများဟာ ကျွန်တော်တို့ တပ်မတော်ရဲ့ အဓိက တိုက်ခိုက်ရေးယူနစ်များ ဖြစ်လာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ တပ်မဟာတွေကို လက်ရှိ ခြေမြန်တပ်မတွေ၊ စကခတွေ၊ သံချပ်ကာကွပ်ကဲမှုအဖွဲ့တွေကနေ ဖွဲ့စည်းယူလို့ ရပါတယ်။ တပ်မဟာမှုးက ဗိုလ်မှုးချုပ်ဗျာ။ တပ်ရင်းအရေအတွက် လျော့ကျသွားမှာ ဖြစ်ပေမယ့် တပ်ရင်းတစ်ရင်းစီက ဖွဲ့စည်းပုံပြည့်အောင် ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် စစ်သည်အင်အား သိသိသာသာ လျော့ကျသွားမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ တပ်မတော်မှာ စုစုပေါင်း တပ်မဟာ ( ၈၇ ) ခုရှိမှာပါ။ ၄င်းထို့ကတော့-
အမြှောက်တပ်မဟာ ၁၁ ( တပ်မလက်အောက်ခံ)
လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးတပ်မဟာ ၆ (တပ်မကြီးလက်အောက်ခံ)
အင်ဂျင်နီယာတပ်မဟာ ၆ (တပ်မကြီးလက်အောက်ခံ)
ထောက်လှမ်းရေးတပ်မဟာ ၆ (တပ်မကြီးလက်အောက်ခံ)
ထောက်ပံ့ရေးနှင့်ပို့ဆောင်ရေးတပ်မဟာ ၁၁ ( တပ်မလက်အောက်ခံ)
ဆေးတပ်မဟာ ၄ (တပ်မကြီးလက်အောက်ခံ တပ်မကြီး၅ နှင့် ၆ မပါ)
တပ်မဟာတွေကို အုပ်ချုပ်ထောက်ပံ့ရေး လွယ်ကူအောင် တပ်မ၊ တပ်မကြီးတွေနဲ့ တွဲဘက်ထားပေမယ့် စစ်ဆင်ရေးလိုအပ်ချက်အတိုင်း ပြောင်းရွှေ့နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
-ခြေလျှင်တပ်ရင်း ( × ၃ )
----ခြေလျှင်တပ်ခွဲ ( × ၄ ) ၊ တစ်ခွဲလျှင် တပ်စု ၃ စု ၊ တစ်စုလျှင် ၆၀မမ စိန်ပြောင်း ၁ ၊ စက်လတ် ၁ ၊ အာပီဂျီ ၁
----လက်နက်ကြီးတပ်ခွဲ ၊ ၈၁ စိန်ပြောင်း ၉ ၊ နောက်ပွင့် ၉ ၊ ၀.၅၀ / ၁၂.၇ စက်ကြီး ၉
---သံချပ်ကာကာကွယ်ရေးတပ်ခွဲ ၊ ATGM ၂၀
----လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးတပ်ခွဲ ၊ ၁၄.၅ စက်ကြီး ၉ ၊ MANPADS ၁၂
----စိန်ပြောင်းကြီးတပ်ခွဲ ၊ ၁၂၀မမ ၁၂
ပဲ့ထိန်းတင့်ဖျက်ဒုံး တပ်မဟာတစ်ခုလျှင် ၂၀ ဖြင့် တပ်မတော်တစ်ခုလုံးအတွက် ၆၄၀ ခန့် ( ဒါတော့ အားလုံးဝယ်ရမှာ ဖြစ်လို့ ကုန်ကျစရိတ် တော်တော်များပါလိမ့်မယ် ။ ဒါပေမယ့် ဒါတွေရှိမှလည်း ရန်သူသံချပ်ကာတွေရန်က ကာကွယ်နိုင်မှာပါ။ တပ်နိုင်လာတယ့် တစ်နေ့ကြရင်တော့ တင့်ဖျက်ဒုံးတွေကို တပ်ရင်းလက်နက်ကြီးတပ်ခွဲ၊ ၈၄မမ နောက်ပွင့်တွေကို တပ်ခွဲပေါ့။ )
ပခုံးထမ်းလေယာဉ်ပစ်ဒုံး တပ်မဟာတစ်ခုလျှင် ၁၂ ဖြင့် တပ်မတော်တစ်ခုလုံးအတွက် ၄၀၀ ခန့်။ လုံလောက်တဲ့ Igla, Strala and HN-5 တွေရှိပြီးသား ဖြစ်လို့ပူစရာမရှိပါဘူး။ဒါတွေက ခြေလျင်တပ်တွေကို အနီးကပ် လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေး စွမ်းရည်ရှိစေမှာပါ။ တာတိုပစ် ၊ တာလတ်ပစ် တွေကိုတော့ သီးသန့်လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေး တပ်မဟာတွေက လုပ်ဆောင်ပေးပါလိမ့်မယ်။ တာဝေးပစ်ကတော့ ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံ့အနေနဲ့ အလှမ်းဝေးပါသေးတယ်။
ခြေလျင်လက်နက်ကြီး၊ လက်နက်ငယ်တွေ ကတော့ ကိုယ်တိုင် ထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်း ရှိနေပြီဖြစ်လို့ ဘာပြသနာမှ မရှိလောက်ပါဘူး။
တပ်မတော်တစ်ခုလုံး ခန့်မှန်းချက်တွေမှာ အရံလက်နက်တွေကိုပါ ထည့်သွင်းတွက်ချက်ထားပါတယ်။
November 22, 2011 5:43 AM
----ဌာနချုပ်တပ်ခွဲ (2MBT ,4MEV )
----တင့်ကားတပ်ခွဲ x ၄ ( 14 MBT )
---- အင်ဂျင်နီယာတပ်ခွဲ (5ARV ,5AEV ,5AVLB ) တပ်စု ၅ စု ၊ တင့်ကားတပ်ခွဲ ၁ လျှင် ၁ စုနှင့် ဌာနချုပ်တွင် ၁ စု
----ဌာနချုပ်တပ်ခွဲ (2CV, 8 MCV,4MEV )
----သံချပ်ကာတပ်ခွဲ ( 12 ICV ,2CV ,2MCV )
---- အင်ဂျင်နီယာတပ်ခွဲ (5ARV ,5AEV ,5AVLB ) တပ်စု ၅ စု ၊ သံချပ်ကာတပ်ခွဲ ၁ လျှင် ၁ စုနှင့် ဌာနချုပ်တွင် ၁စု
-Mechanized Infantry Battalion ( မြန်မာလို ဘယ်လိုခေါ်ရင် ကောင်းမလဲ မသိ )
----ခြေလျင်တပ်ခွဲ ( 12 ICV ,2CV ,2MCV )
---- အင်ဂျင်နီယာတပ်ခွဲ (5ARV ,5AEV ,5AVLB ) တပ်စု ၅ စု ၊ ခြေလျင်တပ်ခွဲ ၁ လျှင် ၁ စုနှင့် ဌာနချုပ်တွင် ၁စု
တင့်ကားများ တပ်မဟာတစ်ခုလျှင် ၅၈ ဖြင့် တပ်မတ်ာတစ်ခုလုံး အတွက် ၄၅၀ ခန့် ။ ဒါလောက်ဆိုရင် အခုရှိနေတယ့် Type-59 and T-55 တွေကိုတောင် အနားပေးလို့ ရမယ် ထင်တယ်။ လက်ရှိ T-72S, Type-88 , Type-69, Type-59 and T-55 များကို အဆင့်မြှင့် ရမည်။ အားလုံးကို Laser range finders, gun stabilizers, night vision, ERA, active defense system များတပ်ဆင်ရမည်။ ဖြစ်နိုင်လျှင် new engine and 125 smoothbore or 105mm rifled gun များတပ်ဆင်ရမည်။
I praised smiley for making this suggestion about army stup. When light infantry battalions were formed they were based on US Ranger Battalions as Special Battalions. But due to material constraints they have to be formed as LIBs. LID are formed as fast moving elite divisions which has limitation compared to full infantry division. If we are to form Corps it should include at least 1 regular division for full battle field depolyment and 1 LID for rapid response.
The regular divisions need to be organised with birgades than TOCs. This will be more efficient while LID can still keep their TOCs.
I don't think Tatmadaw can afford to have an Airborne Division. Instaed, we should base on British 16 Air- assult Brigade and3Commando Royal Marine Brigade with3to4batallions each plus auxillary units. They will be vangaurd forces if any conflict occurs. Royal Air Force has 35 C130J/K and7C17s. We only have4Y-8s.
I think your tank batallion formation is based on US Army setup. I agree that we sould have 14 tanks in each squadroons. Current formation of 44 tank/ battalion is too small. Besides, the flora and fauna of Myanmar is full of rivers and mountains so limitaions of amour units needed to be realized. Instaed of giving protection and punch they could end up as sitting ducks in battlefield.
I think MIB is translated as "Than Kyat Kar, Yan Da Yar Tat". I have seen it in international journal published in the 80s.
Getting back to infantry, we should include Automatic Granade Launchers (AGL) either in brigade or TOC levels if not in batallion. They can produce good firepower for both offensive and defensive stand.
Also, we should include LAWs like RPG 26s in platoon level for anti armor or anti bunker uses.
India transfered T-55s british L7 tank gun. They have quiteareputation. If we can get more of them we should put them on Type 59s as well. I wouldn't count on Chinese made 105mm. They have very short barrel life.
ရေးသားသူ MM at 9:19 PM No comments:
အနာဂါတ် တပ်မတော်ဆိုင်ရာ မိမိတို့အမြင်လေးများ.. ၁
ဆွေးနွေးမှု အပိုင်း (၁)
There is more important thing than artillery. We don't have guided anti tank missle system yet. It would be better to getahand on one, so army can have better anti armor or anti bunker capabilities. Pherhaps Russian 9M131 Metis-M or 9M133 Kornet or Israeli spike missile systems will be good.
November 19, 2011 4:21 AM
Yes, I strongly agree with you. Our current anti armor or anti bunker capabilities in infantry is limited to MA-10 (RPG-7). This is clearly inadequate. I wish we could have MA-14 (Carl Gustav 84mm) at rifle company level and ATGM at battalion heavy weapons company. If this is still impossible due to finicial constraints, ATGM at Tatical Operation Command level would be fine. MA-10 is good for COIN operations, but what if we have to faceaheavily armored foe such as PLA or USArmy. (MA-14 would be effective aganist Thailand's M-60 or Bangladash's Type -59)
Carl Guldstav is an legendary weapon and is adopted by major armed forces, except M1 and M2 versions areabit heavy to react swiftly. I agree that we should deploy ATGM to TOC levels. But. not only we have to consider defence budget allocations, but also we need to watchout for the technical knowledge and education of our individual soldiers. There is one Russian LAW similar to M-72 which is known as RPG 29. It is compact, relatively lighter and could be assigned down to platoon level.
November 20, 2011 4:22 AM
This would beavery long comment. So I would like to pre-apologize to blogger ko MM and all other readers especially as my Myanmar typing is so painfully slow that I've to type in English. I am no professional and please view my opinions as an ameatur butapatriotic Myanmar's good-intentioned but may be idiotic ideas.
There are so many defecienies in our current Myanmar Armed Forces. We, as Myanmar , would like to view our forces as the best in the whole big world. But alas we have to findacompromise between the most we can afford and the least we need to defend Myanmar.
Currently , our Tatmadaw is engaged inaseries of bitter counter insurgency operations. But if we takeacloser look, it's easy to know that it's not (NOT) what our Tatmadaw is for. It must be able to defend Myanmar aganist all possible future aggressors. Who could be that aggressor isapolitical question rather thanamilitary one. So, I would not discuss it here.
To be able to involve inanation vs nation conflict , we need substantial changes in our current force structure.
Our current structure is based around RMC (regional military command တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်) with LIDs (light infantry divisions ခြေမြန်တပ်မ) as strategic reserve which is especially suited for our current COIN operations but not if we have to faceaforeign aggression.
To that mission we have to useaflexible force structure ready for 'defense' as well as 'strike' operations. So , my idea is to use Corps-Division-Brigade structure instead of current BSO-RMC-LID/Armored Operations/ Artillery Operations Command/ Regional Operations Command ( ဒေသကွပ်ကဲရေးနှင့် စစ်ဆင်ရေး) / Military Operations Command ( စစ်ဆင်ရေး ကွပ်ကဲမှု ဌာနချုပ်) - Tactical Operations Command structure. (You can see the simplicity the reform will bring)
Corps will be the largest field units of Myanmar Army. They will be headquarters units to which divisions or brigades can be attached. There will be six corps as follows--
I Corps (Upper Myanmar - Kachin, Sagaing, Mandalay, Magway, Chin)
II Corps (Lower Myanmar - Yagon, Ayerwaddy, Rakhine, Bago)
III Corps (Eastern Myanmar - Shan and Kayar)
IV Corps (South eastern Myanmar - Mon, Kayin and Thanintharyi)
V Corps (Armored/ Heavy Reserve)
VI Corps (Airborne/ Light Reserve)
The corps HQ can be form from current Bureau of Operations စစ်ဆင်ရေးအထူးအဖွဲ့ withaLt Gen as commander as now. The corps HQ will but needalarger staff. Like BSOs , the corps will beadeployable headquarters but moreover unlike the BSOs, the corps will be responsible for its own training with organic training brigade.
N.B I do think Yangon and Naypyidaw , current area of responsibility of BSO5and6respectable need special attention but I don't think it should be corps size.
ိ်ိDivision will also be deployable headquarters units. Each division will have
1.a main division headquarters at its base town
2.a field headquarters which would be deployed as needed
3.two to three tactical operation commands to oversee attached brigades
There will be 11 division headquarters
8 x infantry division (two each for I-IV corps)
2 x armored division (for V corps)
1 x airborne division (for VI corps) [ I think it is impractical to train two airborne division and impossible to obtain sufficient number of transport aircrafts ]
We could transform current RMC into division headquarters with butalittle difficulties. There would be Maj Gen as division commander. The remaining two RMC will be rerolled as capital defense brigade for Yangon and Naypyidaw ( Yagon RMC and Naypyidaw RMC of course!)
November 20, 2011 4:50 AM
ရေးသားသူ MM at 2:33 PM No comments: